Wasaaradda Caafimaadka Somalia oo soo saartay Digniin ku wajahan dadka kusafra dhulka. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaWasaaradda Caafimaadka Somalia oo soo saartay Digniin ku wajahan dadka kusafra dhulka.
Wasaaradda Caafimaadka Somalia oo soo saartay Digniin ku wajahan dadka kusafra dhulka.
March 25, 2020 marqaan Faalloyinka, Somali News 0
MD Deni oo safar Qarsoodi ah dhowr maalin kujooga Degmo qadiimi ah oo ku taala Xeebaha Badwaynta Hindiya.
Ciidanka DFS oo dib ula wareegay deegaan dhawaan ay qabsadeen Alshabaab.